Zahao ireo tranga heloka bevava any Dubai alohan'ny handehanana any UAE | Law Firms Dubai
Zahao ny tranga fakana heloka bevava any Dubai alohan'ny nandehanana tany UAE
Misy fizarana roa mpitsara eto UAE, dia ny fitsarana eo an-toerana sy ny fitsarana federaly. Ny rafitry ny rafitry ny lalàna eto amin'ny firenena dia sarotra amin'ny fitsarana roa tonta, fitsarana sivily izay miasa ao amin'ny kianja mitovy sy Sharia. Ireo rehetra ireo dia mirakotra sehatra ara-dalàna samihafa.
Ny Emirate tsirairay dia manana ny fitsarana federaly azy manokana
Mety ho voasambotra ianao
Ny mpisolovava ataonao dia hanao fisafoana akaiky
Nohazavaina ao amin'ny andininy faha-104 ao amin'ny lalàmpanorenana fa ny manampahefana eo an-toerana ao amin'ny emirates tsirairay no tompon'andraikitra amin'ny raharaha rehetra momba ny fitsarana sy ny olana tsy natolotry ny mpitsara federaly amin'ny alàlan'ny lalampanorenana. Vokatr'izany, ny raharaha ara-pitsarana rehetra dia eo ambany fahefan'ny manampahefana ao an-toerana, fa tsy eo ambany fahefan'ny fitsarana nasionaly.
Fitsidihana any amin'ny tribonaly federaly
Ny andininy faha-105 ao amin'ny lalàm-panorenana dia mamela ny hamindra ny rehetra na ny ampahany amin'ny fahefana ara-pitsarana amin'ny fitsarana federaly amin'ny alàlan'ny lalàna federaly amin'ny fangatahana an'ity emirora ity. Ny raharaha momba ny heloka bevava, sivily ary ara-barotra mamela ny fitsipiky ny fitsarana fangatahana federaly dia voafaritry ny lalàna federaly izay fanapahan-kevitra farany.
Any UAE, ohatra, ny Emirate tsirairay dia manana ny fitsarana federaly azy manokana na dia i Ras al Khaimah sy Dubai aza dia manana ny rafi-pitsarana manokana.
Inona no dikan'izany aminao raha te-hijery tranga amin'ny heloka bevava any Dubai ianao na UAE?
Tsy ilaina ny mpampindram-bola hametraka raharaha polisy any amin'ny faritra onenanao na ao anatin'ny Emirate mitovy. Ka raha lasa mponina any Dubai ianao na taloha, ary manantena fa ny banky na ny mpampisambotra anao dia mametraka raharaha any amin'ny iray amin'ireo biraon'ny polisy any Emirate, dia gaga be no miandry anao, ka tsara kokoa ny manamarina. Raharaha mpitandro ny filaminana alohan'ny nidirany teto UAE.
Ny hany mila ataonao dia ny fidirana ny laharan'ny karatra ao amin'ny kaontinao Emirates
Azo atao izao ny hahafahan'ny mponina mahalala sy manao fisavana amin'ny Internet raha toa ka manana tranga ara-bola voarakitra ao Dubai fotsiny izy ireo ary tsy manan-kery ho an'ny sisa amin'ny Emira. Ny polisy any Dubai dia manolotra serivisy an-tserasera maimaim-poana izay ahafahan'ny mponina ao UAE raha misy ny fandrarana fitsangatsanganana hamelezana azy ireo noho ny raharaha ara-bola any Dubai Emirate.
Ampidino ao amin'ny Google Play ny rindranasa Polisy Dubai
Rehefa mampiasa ity serivisy ity ianao, ny tokony hataonao dia ny miditra amin'ny laharan'ny karatra misy anao kaonty Emirates ary mahazo miditra amin'ny laharana finday izay voasoratra tamin'ny kaomina Emirateso. Vantany vao miditra ny laharana UID ianao, amin'ny maha mpangataka anao dia mila manamarina ny tenanao miaraka amin'ny OTP ianao izay halefa any amin'ny laharan'ny findainao. Mba hanararaotana io tolotra io dia mandehana any amin'ny tranonkala ofisialin'ny Polisin'ny Dubai na download ny fampiharana ny Polisy Dubai hita ao amin'ny Google Play sy iTunes.
Fanamarinana ny satan'ny polisy any Abu Dhabi Online
Ny departemantan'ny mpitsara Abu Dhabi dia manana serivisy amin'ny Internet ihany koa izay ahafahan'ny mponina ao Abu Dhabi hanamarina raha nangataka fanenjehana ho azy ireo ny mpampanoa lalàna Abu Dhabi. Mba hampiasa io serivisy io dia tsy maintsy miditra amin'ny laharan'ny kaonty emirates ny mpangataka ary tsy maintsy miditra amin'ny laharana finday izay voasoratra ao amin'ny ID-emirates aminy.
Hamarino raha manana raharaha mpitandro ny filaminana any Sharjah sy ireo Emirà hafa ianao
Na dia tsy misy rafi-pandaharana an-tserasera ho an'ny Emirates hafa aza, ny safidy azo ampiharina indrindra dia ny manome hery ny mpisolovava amin'ny namana na havana akaiky na manendry mpisolovava. Raha sendra any UAE ianao dia handeha ny hangatahan'ny polisy anao ho tonga manokana. Raha tsy eto amin'ny firenena ianao dia mila mahazo POA (herin'ny mpisolo vava) izay natolotry ny masoivoho UAE ao an-tranonao. Ny minisitry ny raharaham-bahiny ao UAE dia tokony hanamarina ny POA fandikana Arabo ihany koa.
Mbola azontsika atao ny mijery ny raharaha momba ny heloka bevava na ny fandraràna fitsangatsanganana any UAE tsy misy idirates id, azafady mba hifandraisa aminay
Zava-dehibe ny miara-miasa amin'ny mpisolovava izay hanao fisavana feno momba ny mety ho fisamborana fisamborana sy ny fandraràna fitsangatsanganana apetraka aminao any UAE. Ny antontan-taratasy ilaina rehetra dia tsy maintsy arahana ary ny valin'ny fisavana ity dia misy raha tsy mila mitsidika manokana ny manampahefana ao amin'ny UAE.
Ny mpisolovava karamanao dia hanao fisafoana feno miaraka amin'ireo manampahefana ao amin'ny fitondrana any UAE mba hamaritana raha misy ny fisamborana fisamborana na ny fanararaotana fitsangantsangana ametrahana anao. Azonao atao izao ny mitsitsy ny volanao sy ny ora amin'ny alàlan'ny fanalavirana ny mety hisian'ny fisamborana na ny fandavana tsy hiala na hiditra ny UAE mandritra ny dianao, na raha misy ny fanararaotana fiaramanidina any UAE. Ny sisa ataonao dia ny fandefasana ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny Internet ary afaka andro vitsivitsy, dia ho azonao ny valin'ny fangatahana an'io amin'ny alàlan'ny mailaka avy amin'ny mpisolovava.
Tatitra mailaka - Hahazo ny valin'ny kaonty ianao amin'ny mailaka avy amin'ny mpisolovava anao. Ny vokatra dia hanondro raha manana alalana / fandrarana na tsia ianao.
Fanaovana vahaolana vaovao, mavitrika sy famoronana
Mifandraika haingana amin'ny mpisolovava marina haingana sy tsiambaratelo